Rakitić oo hambalyo u diray Antoine Griezmann, isagoo dhinaca kale si weyn u taageeray tababare Valverde – Gool FM
Rakitić oo hambalyo u diray Antoine Griezmann, isagoo dhinaca kale si weyn u taageeray tababare Valverde
Dajiye May 22, 2019
(Spian) 22 Maajo 2019. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Barcelona ee Ivan Rakitić ayaa sheegay suurtagalnimada uu Antoine Griezmann ku imaanayo garoonka Cump Nou ay noqon lahayd miduu si weyn ugu farxo.
Dhinaca kale laacibka reer Croatia ee Ivan Rakitić ayaa tilmaamay in Ernesto Valverde uu yahay macalin tusaale u ah kooxda reer Catalonia.
Rakitić ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Sport” ee dalka Spain wuxuu ugu horeyn ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona wuxuuna yiri:
“Uma maleynayo inaan ka tagayo Barcelona, ​​waxaan heystaa qandaraas saddex sanno ah ee aan ku joogayo garoonka Cump Nou, waa halkan meesha aan doonayo inaan joogo, isla markaana aan ku faraxsanahay aniga iyo qoyskeyga”.
Intaas kaddib Ivan Rakitić ayaa wax laga weydiiyay wararka ku aadan inuu ku biirayo kooxda Inter Milan wuxuuna jawaab celin kaga dhigay:
“Inter Milan waa koox weyn, waxaan kaga hor imaanay sanadkan tartanka Champions League, laakiin ma ogi sababta ay saxaafada iila xiriirineyso, waxaan joogaa meesha aan doonayo, isla markaana aan ku faraxsanahay aniga xaaskeyga iyo labadeyda gabdhood”.
Imaatinta Antoine Griezmann ee kooxda Barcelona:
“Dabcan waan jeclahay in Antoine Griezmann uu ka mid noqdo kooxdeyda, waa xirfadle weyn, ugu yaraan wax walba ayuu ku guuleystay, waxaana hubaal ah in waxtar weyn uu u lahaan doono koox kasta”.
“Waxaa ugu hambalyeynayaa Antoine Griezmann go’aankii uu gaaray, hada hadii aan arko waan ruxi lahaa, waxaana u sheegi doonaa inaan ixtiraamo, sababtoo ah ma fududa inaad gaarto go’aan noocaan oo kale ah”.
Imaatinka Frenkie de Jong iyo aragtidiisa kaga aadan tababare Ernesto Valverde:
“Frenkie de Jong kama ciyaarayo booskeyga kooxda Barcelona, booskeyga waa mid mashquul badan, sidaas darteed ma garanayo sababta ay iigu xirayaan imaatinkiisa”.
“Shaqada Valverde iyo qaabka uu kooxda u leyliyo waa arin fantastic ah, inaan helno tababare isaga la mid ah waa wax aad muhiim inoogu ah, waan ku faraxsanahay ereyada madaxweynaha uu ku xaqiijiyay inuu sii wadan doonto, wuxuu inoo yahay tabbare gaar ah”.
Kooxda Inter Milan oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20… + SAWIRRO
Sadio Mané oo fariin digniin ah u diray kooxda Tottenham, kahor kulanka finalka ee Champions League